कालीगण्डकीले ग्यास चुल्हो लिने, इन्डक्शन चुल्हो दिने - Himalaya Television
२०७९ जेठ ११ गते १०:११
११ जेठ २०७९ वालिङ । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले प्रत्येक घरधुरीमा इन्डक्शन चुल्हो वितरण गर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने झण्डै चार हजार ६०० घरधुरीलाई लक्षित गरी पालिकाले ग्यास चुल्हो प्रतिस्थापन गर्दै इन्डक्शन चुल्हो वितरण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पदभार ग्रहण गर्दै ग्यासको बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाभित्रका सबै घरधुरीमा विद्युतीय इन्डक्शन चुल्हो वितरण गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले भन्नुभयो, “घर–घरमा रहेका ग्यासका सिलिण्डर लिने र इन्डक्शन चुल्हो दिने निर्णय गरेका छौँ ।” यसलाई आगामी गाउँसभाबाट पारित गरेर लागू गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कालीगण्डकीलाई धुँवारहित पालिका बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्युत्को प्रयोगमा जोड दिइएको बताउनुभयो । यसअघि वडा नं ५ को दलित समुदायमा इन्डक्शन चुल्हो परीक्षणका रूपमा वितरण गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी भएसँगै यसपटक पूरै गाउँपालिकाभरि नै इन्डक्शन चुल्हो वितरण गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो । गाउँपालिकाले विद्युत्को पहुँच सबै घरधुरीमा पु¥याउन न्यूनतम विद्युतीय महसुल भुक्तानी गर्दै आएको छ । यसअघि पनि गाउँपालिकाले न्यूनतम २० युनिटसम्म विद्युत् महसुल निःशुल्क गरेको थियो ।
One thought on “कालीगण्डकीले ग्यास चुल्हो लिने, इन्डक्शन चुल्हो दिने”
dilliram giri says:
राम्रो काम धन्नेवाद।बरु बिधुरको बितरण लाइन के कस्तो छ ट्रान्सफरमरले धान्ने स्थिती छ छैन सबै कुराको ब्यबस्थापन गरेर लाग्री गर्दा राम्रै हुन्छ।
यसरी समाधान भयो सल्लेको खानेपानी समस्या (भिडियो रिपोर्टसहित)
चिकित्सा विषय पढ्न चाहनेलाई पौवादुङमा अध्ययन खर्च दिने
घोरल मारेको आरोपमा पक्राउ परेको सिकारी कुकुर यसरी छुट्यो (भिडियो रिपोर्टसहित)
हत्या आरोपमा एक नाबालकसहित १२ जना पक्राउ
म्याग्दीमा एउटै पालिकामा २१६ पहिरो
श्रीमतीको घाँटी कसेर हत्या गरी प्रहरीमा पुगे भुसाल
नेपालमा किशोरीको प्रजनन दर उच्च
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने अस्पतालहरुको तयारी (भिडियो रिपोर्टसहित)
बीमा बोर्डले अस्पतालहरुलाई किन दिन सकेन समयमै पैसा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
‘स्वास्थ्य बीमा’ कार्यक्रम: असफल बनाउने प्रयास ! (भिडियो रिपोर्टसहित)
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अवरुद्ध हुने अवस्था किन आयो ? (भिडियो कुराकानीसहित)
नेपालको कुरिलो विदेश निर्यात
दुबईका राजकुमार र सुनको लौरो ! के हो वास्तविकता ? (भिडियो रिपोर्टसहित)